धर्म-संस्कार – MediaNP
काठमाडौँ । मान्छे न हो केही कुरमा चित्त नबुझेपछि एक अर्कामा दुश्मनी हुन्छ । यसरी यद्यपी कोही व्यक्तिसँगको दुश्मनी यति धेरै कडा हुन्छ जसले जीन्दगी नै बर्बाद पारिदिन्छ । यस्तै भगवानको पालामा पनि एक अर्काको
घरबाट शुभ कार्यमा निस्कदै गर्दा कुकुरले यी ४ अनौठो व्यवहार देखाए, सम्झनुस् शुभ हुनेछ
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:१५0
काठमाडौँ । ज्योतिश शास्त्रका अनुसार जनावरहरुले पनि मानिसहरुको भविष्य र वर्तमानको बारेमा सङ्केत दिन्छन् । जसले गर्दा कुनै मानिस शुभ कार्यमा वा अन्य काममा बाहिर निस्कदा घर पालुवा जनावरले देखाएको व्यवहारले पनि शुभ र अशुभ
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:१६0
काठमाडौँ । मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले पनि हिन्दुको मन्दिर संरक्षण गर्छन् भन्दा जो कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हिन्दु र मुस्लिम दुई अगलग धर्म हुन् । धर्मको नाममा मुस्लिमहरु अन्य धर्मभन्दा कट्टर
के तपाई छिट्टै विवाह बन्धनमा बाधिन चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए आज अक्षय तृतीयाको दिनदेखि अपनाउनुहोस् यि ५ उपाय !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:०६0
काठमाडौँ । के तपाई आफ्नो विवाहको सबै कुरा मिलाउदा मिलाउदै पनि विवाह ढिलाई भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए आज अक्षय तृतियको दिनदेखि ४ दिनसम्म ३ ३ मालाको जप जप्नुस् । किनभने आज बैशाख २४अक्षय तृतीयाको
भनिन्छ बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । बिहानीको समय राम्रो भयो भने दिनभर शरीर पनि शुद्ध र तन्दुरुस्ती हुने विश्वास छ । त्यसैले आयुर्वेदमा बिहानीको समयमा शुद्ध र व्यायामलाई जोड दिनुपर्छ भनिएको हो । दिनको सुरुवात
द्रौपदीले किन बनाइन् पाँच पति ? यस्तो छ वास्तविक कारण
काठमाडौँ । महाभारतकी मुख्य पात्र द्रौपदी पाँच पति भएको कारण सधै विवादमा रहिरहिन् । बहु श्रीमती राख्ने समजमा बहुपति राख्दा अस्विकार गर्ने समाजसँग द्रौपदीले क्रान्ति नै गर्नुपरेको थियो । जसले गर्दा आज पनि
भोली आमा खुवाउने औँसी ! यी उपाय अपनाउनुहोस् हुनेछ लाभै लाभ !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:५१0
काठमाडौँ । यो वर्ष आमाको मुख हेर्ने औँसी बैशाअ २१ गते शनिबार परेको छ । पौराणिक मान्यताअनुसार त्रेता युगको आरम्भ बैशाख महिना बाट शुरु भएको कारण बैशाख महिनाको आमावश्य तिथिलाई बिशेष मानिन्छ । यो दिनमा